Nyika yeNetherlands nzvimbo inoshamisa, inoshamisa mune zvose mbiri dzakanaka uye tsika. Ichitarirwa nenzira dzakawanda gedhi riri pakati peScandinavia neEurope yose, Netherlands (inonziwo Holland) inochengetedza mutsika kubva kune "mahafu" eEurope, ichiita kuti iite imwe yemhando.
Guta rayo guru, Amsterdam, rine mukurumbira wekuve wakasiyana nekwoga. Mitemo iri muAmsterdam pamusoro pekushandisa zvinodhaka inoratidza tsika yadzo yakasara, apo kune mumwe munhu "mumwe nomumwe wake" unhu, uye guta iri pakati pezvakanaka zvikuru muEurope.
Nezvikepe zvinotengeswa kubva kuSouth America, zvishoma kudarika tsika, zvisingatauri mutauro, uye nhepfenyuro dzakanaka dzakashanyira, Netherlands ndiyo nzvimbo yakanaka yekutanga rwendo rweEurope. Munenge mutaundi rimwe nerimwe randinotaura iri mukati meawa (kana zvakadaro) motokari yechitima kubva kumativi eAmsterdam. Imba yakanakisisa yepamusha yemaguta ndeyeAmsterdam, Haarlem, uye Delft.
Zvichienderana nekureba kwerwendo rwako, uye kutora nzvimbo yepamunharaunda yepamunharaunda ichiita nhoroondo, hezvino zvandinokurudzira zvinokosha:
3 mazuva: Amsterdam
5 mazuva, Wedzera: Delft
7 mazuva, onai: Haarlem naRotterdam
9 mazuva, Wedzera: Alkmaar kana Edam / Waterland
11 mazuva, onai: Arnhem, Utrecht, kana The Hague
Language: ChiDutch, asi nechokuita anenge munhu wose muHolland anotaura mitauro yakawanda. Mumaguta makuru, mune zvisiri zvisingazivikanwi kuti vagari vemo vataure mitauro mina kana kupfuura, uye Chirungu inopiwa.
Power Adapter: MuNetherlands (Holland) zvigaro zvemasimba ndezvomudziyo C uye F. Mhepo yakakwana ndiyo 230 V uye inowanzonzi inonzi 50 Hz.
Mhosva uye kuchengetedzwa: Holland inoderera zvikuru mukupara kwemhosva, uye inofanirwa kuendeswa kune imwe chete yezvidziviriro zvinowanzoitwa nomunhu angatora kufamba kune imwe nzvimbo pakutakura mabhandi emari uye kudzivisa kusarura-kutengesa.
Verenga zvakawanda pamusoro peThe Netherlands!
Ndekupi Kwokugara MuAmsterdam
Saka, uri kutungamira kuNetherlands kwekutanga uye unofunga kuti ungagara kupi muAmsterdam? Hurumende yeHolland yeAmsterdam inoparadzaniswa mumasangano e7, inonzi stadsdelen nevanhu vemuzinda, iyo inowedzera kugoverwa kuva maduku maduku. Kunzwisisa chimiro chekutanga, chii chiri mune izvi zvakadzama stadsdelen, uye apo nzvimbo dzakanakisisa dzinofanira kugara, dzichakubatsira kuwana nzvimbo yakakwana yekugara muAmsterdam! Read More
11 Zvinhu Zvisina Zvokuita MuAmsterdam
Amsterdam iguta raunogona kuita sechinhu chero chipi zvacho. Munyika inozivikanwa nokuda kwekutengesa kofi uye mitemo yakasununguka pamashandisirwo emishonga, Amsterdam haisi kungoita nzvimbo yekupemberera uye inosanganisira dzimwe nzvimbo dzakanakisa dzepaki muEurope. Kunyangwe kuenda kuAmsterdam pane bhajheti kunogona kuva kwakaoma, muguta rino rakanaka kwazvo kune zvingava nzira dze ... Read More
Kudzokorora: Amsterdam's A-Train Hotel
Pasinei nokuti tinoenda kupi, tinotarisa zvinhu zvitatu zvakafanana muhotera kwatinogara-nzvimbo, kukwanisa uye kuchengeteka. Isu tiri kure nepamusoro-soro, funga iwe, sezvatiri kunyatsotsvaka ndeyvenzvimbo yakakodzera-inoita kuti isu tifare kunzvimbo yatiri kufamba nayo. Dzimwe nguva, zvisinei, isu tinoshamiswa nediki, mabhuku ekutengesa kwatinoti mumba ... Read More
The Amsterdam Unexpected
Amsterdam is ubiquitous. Munhu wose anoziva nezvemigwagwa yakaisvonaka, musamuziyamu uye, hongu, mitemo yakasununguka pamusoro pezvimwe zvingafunga nezvekusaziva. Iyo inoshuva-kuenda kune imwe nzvimbo, chiratidzo chedhiyabhorosi-anga-kutarisira mukati medu zvose zvinogona kutarisa taboo. Kunyangwe uchiti iwe wakamboenda kuAmsterdam unosangana nevana vanenge-joie-de-vivre, kutarisa kwekunyatsoziva kuti munhu wese ... Read More